आर्यन खान घटनामा भयो अहिले सम्मकै कसैले नसोचेको ठूलो खुलासा, सबै चकित - Khabar Nepali
होमपेज / मनोरञ्जन / आर्यन खान घटनामा भयो अहिले सम्मकै कसैले नसोचेको ठूलो खुलासा, सबै चकित
आर्यन खान घटनामा भयो अहिले सम्मकै कसैले नसोचेको ठूलो खुलासा, सबै चकित
सुपरस्टार शाहरुख खानका छोरा आर्यन ड्र ग्स घटनामा पक्राउ परेका छन् । उनी अदालतले जमानत स्वीकार नगरेपछि न्यायीक हिरासतमा पठाइएका छन् । अगस्त ८ तारिखमा आर्यनलाई अदालत पेश गरिएको थियो । तर एनसीबीका वकिलको तर्क सुनेपछि उनको जमानत अस्वीकार गरियो । तर यो घटनामा निकै ठूलो कुरा खुलासा भएको छ । वकिल सतीश मानसिन्देले अदालतमा भने कि एनसीबीले आर्यन खानको र ग त र मूत्रको नमूना लिएको छैन। जबकि यस्ता घटनामा पक्राउ गरेपछि उनीहरुको मेडिकलका लागि नमुना लिइन्छ ।
अधिवक्ता मन्सिन्डेले अदालतमा मजिस्ट्रेटलाई भने कि आर्यन खानले औषधिको सम्बन्धमा आफ्नो र ग त परीक्षण दिने प्रस्ताव राखेका थिए। तर एनसीबी अधिकारीहरूले नमूना लिन अस्वीकार गरे। आर्यन खान आफ्नो साथी अरबाज व्यापारी संग एनबीसी अधिकारीहरु द्वारा एक अन्तर्राष्ट्रिय क्रूज जहाज मा समातिएका थिए । किन एनसीबी ले आर्यनको र ग तको नमूना लिएन, यो कुरा सबै कानूनी विशेषज्ञहरु र अधिकारीहरु को लागी आश्चर्यजनक छ ।
एनसीबीले आर्यन खानको परीक्षण किन गरेन ?
कानूनी विशेषज्ञहरुका अनुसार, यदि एनसीबीले आर्यनको परीक्षण गरेको थियो र यदि उनको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो भने उनीहरुले आर्यनलाई तुरुन्तै छोड्नु पर्थ्यो । अर्कोतर्फ विशेषज्ञहरु को अनुसार, जतिवेला उनीहरु पक्राउ परे त्यती बेला पार्टीमा ड्र ग्स को प्रयोग गर्न पाएकै थिएनन् । त्यो भन्दा पहिले नै प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गर्यो । तर एनसीबीका अधिकारीहरुले यस विषयमा बोल्न अस्वीकार गरेका छन्।
एनसीबीले आफ्नो पञ्चनामा के लेखेको छ ?
एनसीबीका अधिकारीहरुका अनुसार आर्यन र अरबाज क्रूज मा लगभग १२०० मानिसहरु संग एक सूर्यास्त पार्टी को लागी जाँदै थिए। सामान्यतया, धेरैजसो पार्टीहरु वा सूर्यास्त समुद्र तट मा आयोजित गरीन्छ। यद्यपि यस पटक पार्टी क्रूजमा थियो। यो घटनास्थलमा उपस्थित पंचनामा मा भनिएको थियो कि एनसीबी अधिकारीहरु क्रूज मा ड् रग्स पार्टी को बारे मा जानकारी पाएका थिए। क्रुज मा धेरै यात्रुहरु लाई रोके। उनीहरुले अर्वाज र आर्यनसंग सोधपुछ गरे । अर्वाजले आफुसंग ड्र ग्स भएको बताए र आर्यनसंग मैले यो प्रयोग गरेको छु भने उनको यहि वयानका आधारमा उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हाृ ।